Cha Machine Manufacturers na Suppliers | China tingcha Machine Factory
Akpaka Velcro Mezie Kwụ Ọtọ Now cutter MAX-52CS
Ngwa Kwesịrị Ekwesị maka Velcro, teepu Velcro, eriri naịlọn, eriri, eriri na-agbanwe. Njirimara 1.Sit maka ịcha lable, rịbọn, eriri; 2.Zippers na eriri dị iche iche na nha edozi; 3.Straight mma, gburugburu mma ịhọrọ. Nka na ụzụ teknụzụ Model Voltage Cutting mma Range of Cut Cutting o 'ty / min (ogologo: 50mm) Mbukota size (mm) NW / GW (KG) MAX-52C AC110 / 220V (50-60Hz) mma oyi 5-999.9mm 70 -90 gbubiri 545X385X335 23/25 MAX-52R AC110 / 220V (50-60Hz) Na-ekpo ọkụ ...
Ngwa Kwesịrị ekwesị maka owu, silk, linen, ịkpa akwa, akpụkpọ anụ sịntetik, kapeeti, akwa nhicha, ihe nkiri plastik. Njirimara 1.Ngụkọta kọmputa ziri ezi, ihe ngosi dijitalụ; 2.Auto-azụ, outage ebe nchekwa na nọmba mwube ọrụ. Nka na uzu teknuzu :dị: MAX-980D Volta: 220V (50-60Hz) Ike: 180W tingcha obosara: 1.5 ~ 2.8M Ntuziaka axis ogologo: 1.8 ~ 3.0M Nchapu ọsọ: 7m / s Gbanwee ọsọ: 16000r / min Nchịkọta nha: 765X460X200 ( mm) NW / GW: 13/14
Akpaka Digital Controlled Cloth End cutter MAX-980-QD
Ngwa Kwesịrị ekwesị maka owu, silk, linen, ịkpa akwa, akpụkpọ anụ sịntetik, kapeeti, akwa nhicha, ihe nkiri plastik. Njirimara 1.Full-auto dijitalụ akara usoro; Ngosipụta 2.LCD, dị mfe ịtọ; 3.Auto laa na-na azụ, na akpaaka inwego, outage ebe nchekwa na-egbu oge-na numaber mwube ọrụ; 4.980-QD-1 enwekwukwa, na-eji ntanye. Nka na ụzụ teknụzụ Model: MAX-980-QD Cutting wide: 1.5 ~ 2.8M Ntuziaka axis ogologo: 1.8 ~ 3.0M tingchacha ọsọ: 7m / s Valtage: 220V (50-60Hz) Ike: 180W NW / GW: 23/25 bugharia ọsọ : 16000r / min Mbukota ...
Band Knife Machinecha Machine MAX-900A / B
Njirimara 1. Eji ya na ụlọ ọrụ uwe; 2.Precise ọnwụ; 3.Air kwushin ngwaọrụ na-eme ka obere nguzogide; 4. ”B” ụdị na inverter, mgbanwe mgbanwe; Nka na ụzụ teknụzụ Model Voltage Motor Air ikuku ikuku nkọwapụta tingcha elu Knife snan Knife size Mbukota nha (mm) NW / GW (KG) MAX-550A / B 220/380 1P750 3P550 / 550 370 1000X1200 90mm 550mm 0.45X10X3100 1410X860X1780 190/255 MAX- 700A / B 220/380 1P750 3P550 / 550 370 1200X1 ... Nkem